पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा बेलायती पर्यटक बढ्दै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा बेलायती पर्यटक बढ्दै
डिसी नेपाल , २२ जेठ २०७५
काठमाडौं । नेपालमा बेलायती पर्यटकहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा बेलायती पर्यटकहरु अन्य मुलकभन्दा ज्यादै नै बढेको देखिन्छ।
पर्यटन पर्वद्धन गर्ने क्रममा हालसालै बेलायतको विभिन्न सहरहरुमा नेपाल पर्यटन शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। उक्त शिखर सम्मेलनले नेपाल र बेलायतका पर्यटन व्यवसायी तथा साझेदारहरुबीच आपसी व्यवसाय प्रवद्धर्न तथा विस्तारमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याएको छ।
उक्त पर्यटन शिखर सम्मेलन बेलायतको विभिन्न सहरहरु जस्तै मेन्चेस्टरमा सन् २०१८ को जून ४ तारिखमा बेल्फास्टमा मे २९ तारिखमा र इडेनवर्गमा ३१ मेमा सम्पन्न भएको थियो।
नेपाली राजदूतावास संयुक्त अधिराज्यको समन्यवमा लन्डनमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, पर्यटन क्षेत्रका बिज्ञहरु, टूर अपरेटरहरु गरी १ सय ३० भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
उक्त पर्यटन शिखर सम्मेलन नेपालको पर्यटन क्षेत्रले हालसालै हासिल गरेको प्रगतिका अनुभवहरु आपसमा आदानप्रदान भएको थियो। र हालसालै नेपालले प्रवर्द्धन गरेको फरक क्षमता भएकाहरुका लागि समेत लक्षित गरेको पहुँचयोग्य पदमार्गको बारेमा पनि जानकारी गरिएको थियो।
यस क्रममा उक्त अपाङ्गमैत्री पदमार्गको अवधारण नेपालमा मात्र नभएर समग्र एसिया महादेशमा नै नवीन प्रयास भएको कारण उक्त कार्यको प्रशंसा समेत भएको थियो। यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंहले नेपाल विश्वमा अनुपम गन्तव्यस्थलको रुपमा रहेको बताएका थिए।
उक्त सम्मेलनमा उपस्थित टूर अपरेटर्स, सञ्चारकर्मीहरुको नेपाल र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने चाँसो उल्लेख्य रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रत्येक सहरका आमन्त्रितहरु मध्येबाट २ जनालाई लक्की ड्र पुरस्कार समेतको ब्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालका लागि बलियो आउटबाउन्ड बजार भनेको बेलायत हो। प्रायजसो संयुक्त अधिराज्यका पर्यटकहरु साहसिक अनुभवको खोजी र नयाँ गन्तव्यस्थलको भ्रमण गर्न रुचाउने गर्दछन्।
यस बाहेक बेलायती पर्यटकहरु नेपालका स्थानीय समाज र संस्कृतिको अनुभवहरु खोज्दै स्थानीयपनमा संलग्न हुने गरेको वरिष्ठ निर्देशक सिंहले बताए।
सन २०१७ मा नेपालको पर्यटक आगमनको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कूल ९ लाख ४० हजार पर्यटकहरुमध्ये ५१ हजार ५८ जना बेलायती पर्यटकहरुको आगमन भएको देखिन्छ जुन सन २०१६ को ४६ हजार २ सय ५६ पर्यटक संख्या भन्दा बढेको देखिन्छ।